Misokatra ao amin'ny Distrikan'i Podol ao Kiev i Metro Hostel - RayHaber
HomeIZAO TONTOLO IZAOEOROPEANINA38 OkrainaMisokatra ao amin'ny Distrikan'i Podol ao Kiev ny Metro Hostel
Misokatra ao amin'ny Distrikan'i Podol ao Kiev ny Metro Hostel
26 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 38 Okraina, EOROPEANINA, IZAO TONTOLO IZAO, Railway, ANKAPOBENY, KENTİÇİ Rail Systems, Headline, Metro, VIDEO 0
Metro Hostel, trano fandraisam-bahiny voalohany tany Ukraine nampiasa sarety an-dalamby taloha, dia nosokafana tao amin'ny distrikan'i Podol any Kiev.
Nasiana sarety izany, ny efitrano tsirairay dia nomena anarana taorian'ny toby malaza iray avy amin'ny rafitry ny gara eran-tany. Eo amin'ny rindrin'ny efitrano, nisy fampahalalana momba ny trano fiasana.
Tamin'ny Desambra 2017 roa goavam-be dia novidian'i Mihael Galparin niaraka tamin'ny malemy 546 ho UAH arivo. Tamin'ny voalohany, Galparin, izay tsy nanam-potoana hijerena ireo sariety ireo, dia tonga saina ao amin'ny 6 volana maromaro.
Ao anatin'ireo sarety miova ho efitra 8, ny 4 dia afaka miditra ao amin'ny efitrano tsirairay. Ny vidin'ny fijanonana amin'ny alina dia voalaza ho 400 UAH. (Fanamarihan'i Ukrhaber: Miseho toy ny 450 UAH na 105 TL ny famandrihana.)
(Source: Ukrhab dia)
Famaranana ny lalana ao Alsancak, Izmir 06 / 06 / 2016 Tany amin'ny distrikan'i Alsancak ao İzmir, dia vita ny lalana. Ny serivisy amin'ny làlana dia nomen'ny sheriffs roa. Ny praiminisitra Binali Yildirim, ny minisitry ny fitaterana, ny raharaha maritime ary ny serasera, Izmir, Alsancak mihamora ny lalana eo amin'ny fidirana amin'ny vahaolana amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana mandritra ny taona maro taorian'ny torolàlana nomena ny sonia ny protocol, nosoniavin'ny Tale Jeneralin'ny TCDD sy Izmir Metropolitan. Ireo ekipa monisipaly Metropolitan dia nanomboka niasa haingana, dia nandrava ny rindrina zaridaina ny TCDD'ye. Manodidina ny 1 metatra nesorina…
Ny tranofiaran-dalamby vaovao ao İzmir dia napetraka tao amin'ny serivisy (Photo Gallery) 18 / 11 / 2016 Ny fiarandalamby vaovao ao Izmir dia nirotsaka an-tsehatra: Fampiasam-bola 240 tapitrisa TL amin'ny fiarandalamby fiara 95 amin'ny fiarovana ny tanànan'i Izmir, ny fiara vaovao 5 dia nanomboka ny fiarandalamby voalohany. Ny mpiasan'ny metro dia nandray ny mpandeha voalohany tamin'ny fiarandalamby vaovao tamin'ny voninkazo. Nanome marika feno tamin'ny fiara ambanin'ny fiara i İzmir izay nanintona ny saina amin'ny kasarım yacht "concept design". Miaraka amin'ny rafitra vavahadin'ny fiara vaventy voalohany manerantany, ny fiarandalamby vaovao dia manome fiara mangina sy malefaka noho ny fitaovam-pandrefesana eo anelanelan'ireo kodiarana. Izmir Metro dia ho tompon'ny fiara goavam-be iray amin'ny fiara 182 amin'ny faran'ny volana marsa miaraka amin'ny fahatongavan'ireo vokatra vaovao rehetra ao Shina. Izmir ...
Ny filohan'ny CHP Kılıçdaroğlu tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny tafika dia niditra tao amin'ny Cable Car 10 / 06 / 2012 Mpitarika CHP Kemal Kılıçdaroğlu, tena olana ny rariny, hoy izy: "Ao anatin'ny fiaraha-monina iray mitoky amin'ny rariny no manify ny sira dia hahatakatra izany fofona izany," hoy izy. Voalohany indrindra, ny lehiben'ny CHP Kılıçdaroğlu, izay nanokatra ny fiadidian'ny distrika ao amin'ny distrikan'i Fatsa sy Ünye, dia tonga tao Ordu ary nitsidika ny ben'ny tanàna Seyit Torun. Nandritra ny fitsidihana, ny Filoha Torun, ny latabatra Kılıçdaroğlu'nda Orduspor'un, ny filoha sy ny latabatra dia nanome fanomezana. Niresaka talohan'ny nanombohan'ny lehiben'ny CHP Kemal Kılıçdaroğlu, "ny tafika dia tena tsara tarehy"
Nalefa i Kars Muddy T-Bar Teleski 21 / 03 / 2009 Kars Çamurlu T-Bar Teleski najoro: Ny seramika kiraly sy ala kesika dia lasa toeram-pivoakan-tsambo hafa ho an'ny mpitaingina ny sambon'ny 2009 ao Sarıkamış ny toeram-pisakafoanana Teleski. FITSIPIKA FIFANEKENA FIFANEKENA FIFANEKENA FIFANEKENA MOMBA NY TSIAMBARATELO Fidio ny Fiteninao Fiteny: FITENY Tenin'ny Tanana Ihany Manana Tranonkala Zavatra Alaina Ihany Hijery ny anatiny FANDRAISANA FAMPIANARAN'NY BAIBOLY VALIN'IREO FANONTANIANA ARA-BAIBOLY TOROHEVITRA HO AN'NY FIANAKAVIANA MPIVADY & RAY AMAN-DRENY TANORA ANKIZY ZAVATRA MISY BAIBOLY
Ny fiara Cable Voalohany ao amin'ny faritra dia manompo ao Gaziantep 31 / 05 / 2011 Faritra atsinanana sy atsimo atsinanan'i Anatolia, izay nofaritana ho Paris, Gaziantep, Şahinbey, ny tranobe dia napetraka teo amin'ny seranam-piaramanidina sy ny tobin-tendrombohitra, nahaliana ny olom-pirenena tamin'ireo mpandika lalàna. Ny fanokafana ny Park Şahinbey, izay napetrak'i Şahinbey ao amin'ny faritra manodidina 280 eo anelanelan'i Karataş, Yeditepe, Güneykent ary Şahintepe, dia sary nalaina sary. Tiorkia ambony indrindra eo amin'ny ankizy ny milalao vondrona, ahitana 20 MiniaTurk asa, toerana iray fanaovana fampisehoana, 950 mitranga ao amin'ny toeram metatra ny rano izay mpandihy sy ny fampisehoana, ary ny fiverenana an-tendrombohitra walkable tariby fiara sy ny kalesy no napetraka eo amin'ny fanompoana. Gouverneur Gaziantep Süleyman Kamçı, AK Party General a
DHL 50 no mpanorina ny indostrian'ny fitaterana an'habakabaka haingana
Fanamoriana Metropolitan amin'ny Networks fitaterana
Famaranana ny lalana ao Alsancak, Izmir
Ny filohan'ny CHP Kılıçdaroğlu tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny tafika dia niditra tao amin'ny Cable Car
Ny fiara Cable Voalohany ao amin'ny faritra dia manompo ao Gaziantep
Ny seranam-piaramanidina Eren ao Eren dia manompo
Ilgazda 1 km 600 m Long Chairlift efa napetraka
Ny fiara fitateram-piaramanidina Ski Atabarı napetraka amin'ny serivisy
Tetezana maoderina miara-mikorana roa amin'ny dobo